Waxaan Leenahay Baarlamaan na Meteli Kara!.. | Home/Wararka | somaanta
Waxaan Leenahay Baarlamaan na Meteli Kara!..
Baarlamaanka Soomaaliya waxay galeen diiwaanka marka loo eego wixii ay ka sameeyaan Hoolkii Doorashada sababtoo ah waxay doorteen Hogaamiye Shacabku aad u jecel yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ay hore dadku u arkeen waxqabadkiisa, Dabaaldegyo ayaa ka bilowday Caasimadda Muqadisho siyaabo aad isugu dhow amaba isku mid ah haddii si loo eego ayaana looga hadlay Doorashadiisa, Sheekadu waxay ka bilaabatay Baska dhexdiisa.
“Guushani waa mid lawada leeyahay waxaana nagu waajib ah hadii aan nahay shacabka Soomaaliyeed in aan Ilaahey u mahadcelino in badan, marka labaadna waxaa mahadasan Sheikh Bashiir Axmad Salaad oo wacdi iyo waano ku booriyey Baarlamaanka iney doortaan Murashax wax tari kara dadka iyo dalka, marka Sedaxaadna waxaa bogaadin mudan xubnaha labada Aqal ee Baarlamaanka oo aynaan la’aantood maanta sidan u naalooneen” sidaa waxaa yiri ninkii Sheekada Baska ka bilaabay.
Nin kale oo Baska gadaal ka saaraa ayaa yiri. “Marka runta laga abaaro wixii ka dhacay Hoolkii Doorashada waxay ahayd wax cajiib ah waxaa aad noogu adkayd in aan aamino xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya oo Taariikh madow hore u lahaa, laakiin Baarlamaanka hada jira ee dhowaan la soo doortay waxay mudan yihiin bogaadin kal iyo laab ah waayo waxay na geliyeen kalsooni xad dhaaf ah sababtoo ah aad bay nooga farxiyeen markay aqlabiyad ku doorteen nin aan naqaano oo ah Maxaamed Cabdulaahi Farmaajo”.
Ninkii Sedaxaad ayaa isna hadlay oo yiri. “Horta Baarlamaankaan rag iga dheh” markaasaa la yiri dumar ayaa ku jira? Waxa uu yiri. Rag iyo Dumar dhamaantood waa rag mar hadii ay u codeeyeen Shacabkii Soomaaliyeed ee dulmanaa”. waa uu sii hadlay oo waxa uu yiri. “Maanta aniga iyo Shacabka waxay nooga dhigan tahay Maalintii Xorriyadda” waxaa la yiri Sheekada xadka ha dhaafin, markaasuu yiri. “Waan idinka yeelay waxay nooga dhigan tahay maalintii Milatarigu qabsadeen Soomaaliya 1969-kii oo meesha laga saaray xukuumadihii Rayidka ee shacabka nabad iyo nolol u diidey” inta lawada qoslay ayaa la yiri haa tan ayaa macquul ah.
Islaaan ayaa hadalka qaadatay maarkaasey tiri. “Raggiinaan Maanta oo dhan waxaad ku rafaneysaan Baarlamaanka laakiin miyaydaan ogayn in Hogaamiyaha la doortay ee Farmaajo uu yahay ninkii na heshiisiiyey anaga shacabka ah iyo ciidamada” Islaantii waxa ay intaa ku dartay. “Waxa kale oo uu ahaa ninkii mushaarka u bilaabay Naafadii Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya oo ku dacdaraysnaa Cusbatalkii Martiina”.
Gabar kale ayaa soo boodey oo ka dhex gashay hadalkii Islaantii, waxa ayna tiri. “Eedo adigaa hadalka ku watee Farmaajo waa badbaadiyaha Ciidamada Soomaaliya waxa uu u bilaaabay Mushaar in kastoo uu aad u yaraa hadana waa ay ku qanacsanaayeen, waxa kale oo uu u damqan jirey Barakacayaasha”.
Wiil dhalinyaro ah ayaa isna hadlay oo waxa uu yiri. “Farmaajo Ciidamada iyo Barakacyaasha kaliya uma roona waa ninkii na baray in shaqaalaha Dowladu xuquuq leeyihiin” waxa la yiri jilci. Waxa uu yiri. “Markii uu yimid ayaa u dambaysey Shaqaale Dowladeed oo la cayriyo, wixii isaga ka horeeyey marka Wasiir la soo magacaabo waxa uu cayrin jirey Shaqaalihii isaga ka horeeyey waxa uuna keensan jirey Shaqaale Beeshiisa ah” Beelo!! ayaa hal mar la wada yiri oo u dhiganta Mahadsanid.
Nin aan is iri isagaa ugu da’ waynaa dadkii Baska saarnaa ayaa hadlay oo yiri. “Ninka la doortay Abshir Alaha nooga dhigo, marka xigtana Soomaaliya waxa cuuryaamiyey waa musuq waxaan ka doonaynaa in uu la dagaalamo si dalka iyo dadku horumar u gaaraan”.
Markaas kadib ayaan u soo dhaadhacay Magaalada oo ay hareeyeen Banaanbaxyo lagu taageerayo Hogaamiyaha cusub ee la doortay gaar ahaan Wadada Maka Al Mukarama, waxaan la kulmay mid ka mid ah Ciidanka Xoogga oo dhex socdey Dibadbaxayaasha, waxaan waydiiyey dareenkiisa waxa uuna yiri. “Waa Ilaaahey mahadiis, Xalay markii la maqlay in Madaxwayne loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Dukaanleydii waxay bilaabeen in ay Dayn na siiyaan, taasina waxay ku tusaysaa sida xaqeenii u soo dhowaadey”.
Nin kale oo oday ah ayaa yiri. “Xalay Xaafaddeena Buula Xuubey waxaa Banaanbixii Dadwaynaha laga celin waayey Gabar Umushay Habeenkii Sabtida, markaan arkay Gabadhaas ayaan anigu la yaabay taageerada ay shacabka Muqdisho u hayaan Madaxwayne Farmaajo”.
Intii ay socdeen Banaanbaxyada lagu taageerayey Madaxwayne Farmaajo ayaa mid ka mid ah dadwaynihii wadada hareerteeda taagnaa yiri. “Maanta maxaa dadkan soo saaray, Magaaladu waa camiran tahay, Baabuurta iyo dadku caadi ma ahan”. Waxaa durba u jawaabey mid hareertiisa taagnaa, waxa uuna yiri. “Dadkan waxaa soo saaray waxaa la doortay Hogaamiye lagu diirsaday lixdii bilood ee uu Ra’iisul Wasaaraha ahaa oo waxqabadkiisa la arkay.”. Si kastaba Madaxwaynaha la doortay Alow noo barakee…
W/Q. Cabdinaasir Xersi Iidle..
Published: 2017-02-10 10:30:38